Heatmaps: 5 maturusi ekuvandudza kutendeuka | ECommerce nhau
Mepu dzinopisa, idzo dzinodaidzwa kunzi mapapu, dzinotipa iyo data iyo Vanotibvumira kuti tione kuti sei, sei uye kupi vashandisi vanobatana newebhusaiti yedu. Kunyangwe muchokwadi, chakanyanya kukosha kududzira kwatinoita kwedata iri. Zvichienderana nekuti chinangwa chedu ndechei, tinokwanisa kududzira, uye nekudaro tichitungamira, iyo dhata munzira uye zvinangwa zvatinoda. Mune ino kesi, kugadzirisa webhu kushandurwa kwevashandisi.
Muchinyorwa chanhasi, tichaona zvishandiso zvishanu zvinoenderana nemepu dzemoto, kusimudzira shanduko. Naizvozvi, iwe unozodzidza kuona "dzinopisa" nzvimbo, idzo idzo vashandisi vanowanzo teerera zvakanyanya. Zvakare kuti uone kuti ndezvipi zvinhu zvinomutsa kufarira kukuru, uye nekudaro, isa mari yako mukuita chiito chaunotarisira kubva kune vako vashanyi vewebhusaiti kuti chioneke uye chinakidze.
1 Matipi ekuvandudza kutendeuka nemamepu ekupisa
Matipi ekuvandudza kutendeuka nemamepu ekupisa
Zviri Mukati. Ndicho chakanyanya kukosha uye chakakoshawo webhusaiti, zvirimo. Iko hakuna miganho pakuwedzera kwayo, chero bedzi ichipa izvo izvo vashandisi vari kutsvaga. Ndokunge, zvemukati zvakawandisa uye zvinoshaikwa mukuenderana uye / kana nharo dzinowedzera kukosha dzichaita chikamu chakakura chevateereri vako bounce. Naizvozvo, zvakakosha tarisa mhando yezvakapihwa, uye izvo zvinobatsira vashandisi. Kana paine chinokanganisika, mepu yekupisa inogona kutinyevera kubva kana vashandisi vakarasa kufarira, uyezve ndedzipi nzvimbo dzakakwezva kutarisisa.
Fona uye / kana zviito mabhatani (CTA). Kuteerera kune zvinonyorerwa nevashandisi zvichaita kuti tione mashandiro anoita maCAA atakabatanidza. Mukupedzisira, ivo ndivo vanozogadzira shanduko, uye nemepu yekupisa tinogona kuona mashandisiro evashandisi. Kunyangwe kune chitoro chepamhepo, kunyorera, nezvimwe
Ita bvunzo dzeA / B. Nekugadzira maviri maBhaibheri (kana kupfuura, zvinoenderana nechirongwa) chewebsite yako, iwe unozogona kuona kuti ndeipi vhezheni inoshanda zvirinani. Zviri yakanaka kana iwe uine traffic yakawanda, kuti ndikwanise kuwana chaiwo uye akagadziridzwa manhamba. Nezve izvi, kana iwe uchinge uine zvemukati wakanaka uye multimedia, unogona kusimudzira shanduko zvakanyanya, nekuita kuti webhusaiti yako igadziriswe uye yakatarisa pachinangwa chako chikuru. Natsiridza kutendeuka.
Kubva pano, kune akasiyana zvirongwa zvekugadzira kupisa mepu. Tichaona zvishandiso zvishanu zvakakodzera izvi zvinangwa.
Sumo iri heatmap ruzivo uye manejimendi chishandiso cheWordPress. Mepu dzinopisa dzinogona kugadzirwa uye kutarisirwa kubva kuWordPress dashibhodhi. Kamwe iyo plugin yaiswa, iwe unofanirwa kuimisa iyo, iri nyore kwazvo.
Kugadzira mepu yekupisa NaSumo, chakanakira kuenda kune webhusaiti yedu, kubva kuakaundi yedu yeWordPress. Kana dandemutande ravhurwa, kurudyi kwedu, tichava nepaneru padivi nechiratidzo muchimiro chemoto unoti "Mepu yekupisa", uye nekudzvanya pairi tebhu inozoratidzwa. Iko kwarinoti "REKODI" (rekodhi kana rekodhi, muchiSpanish), tinogona kudzvanya uye kutanga kurekodha zvese zvakadzvanywa zvichagadzirwa kubva panguva ino zvichienda mberi.
Kumira kurekodha, tinogona kuisa peji redu zvakananga kubva kuWordPress, sezvatakaita muchirongwa chekare kutanga kurekodha, kana kuwana iyo Sumo peji.
Kugadzirisa mamepu ekupisa eSumo, isu tinopinda yedu WordPress pani, uye muSumo Configuration pani, isu tinoenda kune chikamu cheAnalytics uye kubva ipapo tinodzvanya paMepu Mepu. Kubva ipapo, tinogona kuona semuenzaniso muMishandirapamwe (mishandirapamwe), uye iwe unokwanisa kuona marekodhi ekupisa emepi ari kuitwa panguva iyoyo uye kubvira paanoitwa.
Hotjar chishandiso chekugadzira inoteerera Heat Mepu iyo inokutendera iwe kuti ugadzire ivo zvisina kujeka kubva kune chishandiso icho vashandisi vari kubatanidza. Zvimwe kubva pakombuta, piritsi kana nhare mbozha. Inopa matatu akasiyana mamapu:
Dzvanya. Iyo inonyora nzvimbo dzine huwandu hwakanyanya hwekwakabaya nemumvuri wemavara, kubva kunzvimbo dzinotonhora kwazvo, mubhuruu, kana nzvimbo dzinopisa, mune dzvuku. Iyi modhi saka inongowanikwa chete kumakomputa. Izvo zvinokonzerwa nerudzi rwe «Tapira» yemapiritsi uye nhare.
Mupumburu. Nemepu iyi tinogona kuona kudzika peji redu rekumhara rinogamuchira mupumburu kubva kuvashandisi. Kana pane imwe nguva vakatanga kumira, tinogona kunzwisisa kuti chii chakakodzera. Pamwe kubva pane zvakashata zvemukati, kune izvo neimwe chifananidzo kana ndima, zvinodudzirwa kuti magumo akatosvika kare, nezvimwe.
Kufamba kwembeva. Kunge mamepu ekudzvanya ekupisa, iyi sarudzo inongowanikwa chete kumakomputa.
Hotjar zvakare inobvumidza zvakarekodhwa kuziva zvese nezve kudyidzana kwevashandisi newebsite yako, kubva pakufamba kwembeva, kupururudza kwavakaita, kwavanga vachibaya, nezvimwe. Iyo kunyange ine chishandiso kuyera shanduko yemitengo kubva pamatanho iwe aunoratidza.
Chimwe chishandiso chakakurumbira chekugadzira mamapu ekupisa. Crazy Egg ine zvakwakanakira pamusoro pevakwikwidzi vayo senge "confetti mepu." Nenzira iyi, kudzvanya kunoonekwa zvakanyatsonaka, kusiya nzvimbo dzine mavara emamepu ekupisa. Iyo zvakare ine "Kumira pamusoro" mepu, kwaunogona kuona kusvika kuzana rekudyidzana.
Pakati peimwe misiyano, ndeyekuti inochengetedza nhoroondo yemawonero, iri intuitive, uye haina kudhura semamwe maturusi ekushandisa kumwe chete.
Pamwe chete neCrazy Egg, iwo ndiwo maviri akakosha anotonga pamusika. DzvanyaTale Icho chishandiso chakazara chinotibvumidza kutora yakawanda yekuongorora uye data kubva kune traffic yewebhu webhusaiti. Inogona kuyedzwa mahara, uye iwe unogona kuona mafambiro evashandisi kunyangwe munguva chaiyo. Ehezve, chishandiso chakaomarara, chine rukoko rwakadzikama rwekudzidza. Inonyanya kukurudzirwa kumakambani makuru kana nzvimbo dzine huwandu hwakawanda hwetraffic.
Ini ndanga ndambotaura izvi mune imwe chinyorwa, asi ini ndakachidzorera nekuti chakanakira homwe dzakasimba. Yandex Metrica Ndicho chishandiso chemahara, iyo yekuwana mamamepu ekupuruzira, kutora chikamu, tinya mamapu (akafanana neaya eGoogle Analytics)
Uye zvakare, isu tinowana kumwe kushandiswa senge kwakadzika kuongorora kwewebhu, senge segmentation, kutendeuka kuyerera, traffic mune zvakawandisa, uye zvese nenzira yakajeka uye yakapusa nzira. Chishandiso chikuru chinopa maficha emahara ayo anobhadharwa kumwe kunhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Heatmaps: 5 maturusi ekuvandudza kutendeuka
Iko kukosha kwekuvandudza dhizaini yekushanduka kwewebhu webhusaiti